Nwanyị Lavitan: Jụọ ajụjụ gị gbasara mgbakwunye a!
Fit Bịara Achịcha: Lee ntụziaka abụọ ị ga-eme na skillet!
Esi mee ka underarms: Mụta otu esi eme ya nke ọma na n'ụlọ!
ahụ ike	 7 March 2017
Ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị nwere usoro ihe siri ike, ọrụ, ụlọ, ndị enyi, ezinụlọ, na-etinye ike dị ukwuu na ndụ ha kwa ụbọchị ma yabụ kwesịrị itinye mgbakwunye, vitamin, na ihe ndị ọzọ na-eme ka ndụ dị mma yana n'ike. Lọ ọrụ ntecha, na ọgwụ, juputara na nhọrọ maka ndị chọrọ ume iji nagide usoro ị na-eme kwa ụbọchị. Ihe mgbakwunye, nke a na-akpọ ihe ịchọ mma nke edozi ahụ, bụ ndị a na-achọkarị, na otu n'ime ha nwere nnukwu ihe ịga nke ọma taa, nwanyị Lavitan. Chọpụta ihe niile gbasara ya ugbu a!
Kedu ihe bụ nwanyị Lavitan?
Nutri ntecha bụ nhọrọ ọhụrụ maka ndị na-achọ mgbakwunye na ihe ịchọ mma nke na-enyere ahụ ike ha aka. Karịsịa ụmụ nwanyị, ndị na-emewanye ihe omume siri ike na-ejedebe na-achọkwu vitamin na mineral, ma ọ bụ nsogbu ahụike nwere ike ọ gaghị emepụta n'ọtụtụ dị mkpa. Nwanyị Lavitan bụ otu n'ime mgbakwunye ọrụ ebube maka ụmụ nwanyị.
Nwanyị Lavitan bụ mgbakwunye vitamin nke ụlọ nyocha Cimed mepụtara. Ngwakọta ya nwere vitamin C, B3, B5, A, B2, B1, B6, B12 na vitamin D, na mgbakwunye iron, zinc na folic acid. Ihe ndị a bụ ụfọdụ akụkụ dị mkpa na ahụ mmadụ ma enwere ike mepụta oge. Site na lavitan ụmụ nwanyị enwere ike ịnye nri nri na nri ịnweta nke ahụ nwanyị chọrọ.
Ebee ka ịzụta Lavitan? Ego ole?
Anyị mere nyocha mara mma na ịntanetị wee chọta Lavitan na ọnụahịa kacha mma na Drogaria Araújo na Drogaria Onofre. Dị ka ọ bụ ọgwụ na-adịghị mkpa ndenye ọgwụ ịzụta, ị nwere ike ịzụta ya n'udo n'ịntanetị. Na mgbakwunye na nnukwu azụmahịa, ụlọ ahịa ọgwụ abụọ ahụ nwekwara nnyefe na Brazil niile. Naanị ịzụta ya ma ị ga-enweta iwu gị n'ụlọ. Pịa n'okpuru iji nweta weebụsaịtị nke ọ bụla n'ime ha.
Iji chọpụta ọnụahịa ahụ, ị ​​ga-agakwa na weebụsaịtị ahụ, ebe mbupu ahụ dịgasị iche dabere na mpaghara ebe ibi.
Uru na uru nke Nwanyi Lavitan
Lavitan Mulher, ịbụ vitamin na ịnweta mgbakwunye, na-ekwe nkwa ụfọdụ elele dị ka mmụba ahụ dị mma, obere nrụgide, ike karịa maka usoro ị na-eme kwa ụbọchị, ncheta dị mma ma zere ọrịa metụtara obi.
Ọbụna ndị nwere ezigbo ọrụ na ezigbo mmepụta nke vitamin na mineral ndị dị na Nwanyị Lavitan nwere ike iji ya, ọ bụrụhaala na ị gwa dọkịta gị na ị na-eji mgbakwunye ahụ na ọ gafere usoro ọgwụgwọ a tụrụ aro kwa ụbọchị. Womenmụ nwanyị ndị na-ewere Lavitan na-adịkarị njikere maka ọrụ ha, na-eguzogide oyi na flu, n'etiti ndị ọzọ. Atụla anya nsonaazụ a na-ahụ anya site na iji Lavitan Mulher, ọ nwere ọrụ nke ime "n'ime" nwanyị ahụ, ya bụ, nsonaazụ ya dị na mmụba na ahụike ụmụ nwanyị.
Etu esi eji Nwanyi Lavitan
A na-ere Lavitan Mulher n'ọtụtụ ụlọ ọgwụ na ụlọ ahịa ọgwụ na igbe nke 60 capsules. A na-atụ aro ka ị jiri ọgwụ 1 were kwa ụbọchị maka mgbatị vitamin na-ezuru ezu, mana a na-atụ aro ka ị gakwuru dọkịta ka o wee nwee ike iduzi ụzọ kachasị mma. Womenmụ nwanyị dị ime na ụmụaka ruo afọ atọ kwesịrị iji Lavitan Mulher naanị ma ọ bụrụ na dọkịta kwadoro ya.
Ihe mgbakwunye a enweghị gluten.
Max Amora - Na-eme ka Mgbapụta nke Menopause na-ebelata
Ọ bụrụ na ị bụ nwanyị gaferela afọ iri anọ na ihe mgbaàmà mbụ nke nrụpụla amalitela ịpụta, anyị na-akwado ka ị nwalee Max Amora! Ọ bụ ihe mgbakwunye sitere n'okike nke ga - enyere gị aka ịlụso mgbaàmà nke menopause ọgụ ma nye gị ndụ kacha mma.
Dị ka aha ya na-egosi, Max Amora bụ mgbakwunye nke mkpụrụ osisi a gosipụtara na ọ ga-enyere aka na ahụike na ahụike ụmụ nwanyị ndị na-agabiga oge a nke mgbanwe na mgbanwe.
LỌ ỌZỌ BANYERE MAX AMORA, Kpọtụrụ ebe a
Anyị depụtara uru dị ukwuu nke Max Amora n'okpuru:
Na-alụ Mgbaàmà ohụ Ọrịa
anọghị na ọkụ ọkụ
Na-alụ mgbakasị kpatara site na mgbanwe mgbanwe hormonal
Alaghachi agụụ mmekọahụ
Kedu ka m ga-esi azụ Max Amora?
Max Amora bụ ngwaahịa ere naanị na weebụsaịtị ya, http://maxamora.com.br/. Nke ahụ pụtara na ị gaghị achọta ya na ahịa ọgwụ ma ọ bụ ụlọ ahịa nri ahụike dịka ọmụmaatụ. Nnukwu uru nke a bụ na ị nwere ike ịzụta ihe ugbu a, ị ga-enweta usoro gị na adreesị ị na-egosi. Dị irè, ọ bụghị ya?
Kwụ ụgwọ nwere ike ịkwụ ụgwọ site na kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ akwụkwọ ego akụ, na kaadị ahụ ị nwere ike kewaa. Pịa ebe a iji zụta!
Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịkwụsị ikwu na Max Amora nwere ugbu a ụgbọ mmiri na-akwụghị ụgwọ na Brazil niile. Mana anyị amaghị oge ole onye nrụpụta ga-eji kwalite nkwalite a! Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie inwe mgbanwe a na ahụike gị, were ohere ịzụrụ ihe!
Pịa bọtịnụ dị n'okpuru ebe a iji zụta:
Etemeete nke nwanyị Lavitan
steeta nke magnesium
Gum arabic (emulsifier), na shellac (icing)
Beeswax na carnauba wax
titanium dioxide dai,
Leekwa vidiyo banyere Nwanyị Lavitan:
Ọ bụrụ na ị jirila Lavitan Mulher, mee ka anyị mara na nkwupụta banyere ahụmịhe gị na ngwaahịa a. Ma ọ bụrụ na ị ka nwere ajụjụ ọ bụla, hapụ ajụjụ gị na nkwupụta!
409 echiche na “Nwanyị Lavitan: Chọpụta uru nke mgbakwunye a!"
Comments Okenye Ochie
Ọgọst 4, 2018 na 11:29 am - Dezie
Ndewo, ụbọchị ọma!
Enwere m afọ mgbu ma chọọ ịma ma m nwere ike ịkpọrọ nwanyị Lavitan?
Ọgọst 6, 2018 na 08:39 am - Dezie
Amalitere m iwere L na-agwa gị ụbọchị anọ gara aga, achọpụtara m na ọ na-agbanwe ọbara mgbali m ọbụna n'anya m. Ma ọ naghị edozi ya. Isi na-afụ ụfụ mgbe niile.
Kedu ihe i kwuru? ??
Ọgọst 13, 2018 na 21:36 am - Dezie
Sụọ iyi ọ na - abawanye mgbali anya, agbanweela m ya, kedu ka ị siri chọpụta nke ahụ?
Ọgọst 16, 2018 na 09:41 am - Dezie
Enwere m ike ị nweta collagen ma were lavitan?
September 26, 2018 na 09:33 am - Dezie
Lavitan na ndị kachasị mma, amalitere m ịnara ya, ahụrụ m nsonaazụ n'ụbọchị nke atọ, m na-ehi ụra mgbe niile na-enweghị mmetụta maka ihe ọ bụla, ana m acha anụnụ anụnụ si A ruo Z. Achọrọ m iwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha odo odo (maka ntutu )
Super nwere ike ikwu hụrụ n'anya.
Ọktọba 6, 2018 na 12: 52 pm - Dezie
Nwere ike ụmụ nwanyị were lavitan maka ụmụ nwoke?
November 5, 2018 na 14:41 am - Dezie
onye nweworo thrombosis nwere ike iwere nwanyi lavitan?
Disemba 4, 2018 na 06:32 am - Dezie
Mgbe m bidoro inara vitamin n'ahụ nwanyị nke nwere oge ahụ, agbaalarị m nsọ ugboro abụọ a, ọ ga-abụ vitamin ahụ?
Debora Rodrigues bụ nwa nwanyị
Jenụwarị 1, 2019 na 22:05 am - Dezie
Lavitan ọ na-enwe abụba? Ahụ adị m ka obere iwe.
Orlistat: Kedu ihe ọ bụ maka? Olee otú iji? Kedu mmetụta ndị dị na ya?
salad n’ime ite
Teas iji kwụsị gas: Bibie ihe ọjọọ a kpamkpam!